Coiling machine used - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: coiling machine used in fabric surface (英語 - ビルマ語)
They also published specifications of the core technologies used in the system.
၎င်းတို့သည် စနစ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် အဓိကနည်းပညာများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
This value represents the speed that was used in suchacontext the last time.
This value represents the burning flags that were used in suchacontext the last time.
The interaction of these treatments with other drugs used in the patients should be monitored carefully.
ဤကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် လူနာများတွင် အသုံးပြုသော အခြားဆေးများအကြား အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကို ဂရုပြု စောင့်ကြည့်သင့်သည်။
Face masks have also been widely used in Japan, South Korea, Malaysia, and Singapore.
ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံများအတွင်း မျက်နှာဖုံးများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
The photo used by Anonymous which is now all over the internet is harmful and should not have been used in that fashion.
နသန်ကလည်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အဖွဲ့မှ အသုံးပြုထားသော ဓါတ်ပုံသည် အန္တရ့ာယ်များကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
Steroids, as immunosuppressants, were widely used in the treatment of SARS to reduce the severity of inflammatory damage.
ရောင်ရမ်းသည့်ဒဏ် ပြင်းထန်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် SARS ကုသခြင်းတွင် စတီးရွိုက်ကို ကိုယ်ခံအားထိန်းချုပ်ဆေးအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
The name was first used in 1968 by an informal group of virologists in the journal Nature to designate the new family of viruses.
ထိုအမည်ကို 1968 ခုနှစ်တွင် အလွတ်တမ်း ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က Nature ဂျာနယ်တွင် ပထမဆုံး စတင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ် အသစ်တစ်ရပ်အား မှတ်တမ်းတင်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Sinceahigh dosage of corticosteroids was widely used in severe SARS patients, many survivors suffered from avascular osteonecrosis with life-long disability and poor life quality.
ကော်တီကိုစတီးရွိုက် (corticosteroid) ဆေး ပမာဏအများအပြားကို ပြင်းထန်သော SARS လူနာများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ အများအပြားတွင် avascular osteonecrosis ကို ခံစားခဲ့ရပြီး တစ်သက်တာမသန်မစွမ်း ဖြစ်သွားကာ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
Sake is often used in religious rituals in Japan, and Machida Brewery, like just about all sake breweries, is blessed byaShinto priest and decorated with sacred Shinto ropes.
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆာကေးကို မကြာခဏဆိုသလို ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းဓလေ့ အခမ်းအနားများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပြီး မာရှီဒါ အရက်ချက်ရုံသည်လည်း အခြား အားလုံးနီးပါးသော ဆာကေး အရက်ချက်ရုံများကဲ့သို့ ရှင်းတို ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ ကောင်းချီးပေးခံထားရပြီး အထွတ်အမြတ်ထားသော ရှင်းတို ကြိုးများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။
အလိုလိုသေသော တိရစ္ဆာန်ဆီဥ၊ သားရဲကိုက်၍ သေသော တိရစ္ဆာန်ဆီဥကို အခြားသို့ သုံးရသော် လည်း၊ အလျှင်းမစားရ။-
According toastudy, researchers in Guangzhou, China, suggested that pangolins - long-snouted, ant-eating mammals often used in traditional Chinese medicine - are the potential intermediate host of SARS-CoV-2 based on 99% genetic homology inaCoV discovered in pangolins and SARS-CoV-2.
သင်းခွေချပ်များရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (CoV) နှင့် SARS-CoV-2 တွင် ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇ 99 ရာခိုင်နှုန်း ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည့် အခြေခံလေ့လာမှုတစ်ခုအရ တရုတ် တိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည့် နှုတ်သီးရှည်ပြီး ပုရွက်ဆိတ်စားသုံးသည့် နို့တိုက်သတ္တဝါ သင်းခွေချပ်များသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ အလားအလာရှိသည့် ကြားခံ လက်ခံကောင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့မှ သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
The CDC recommends that ifaCOVID case is suspected or confirmed atafacility such as an office or day care, all areas such as offices, bathrooms, common areas, shared electronic equipment like tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines used by the ill persons, should be disinfected.
ရုံး သို့မဟုတ် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းကဲ့သို့ အဆောက်အဦများတွင် COVID ဖြစ်ပွားမှု သံသယရှိခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်းများ ရှိလျှင် ရုံးခန်းများ၊ ရေချိုးခန်းများ၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများ၊ တက်ဘလက်များ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ၊ ကီးဘုတ်များ၊ ရီမုများကဲ့သို့ အများဝေမျှသုံးစွဲသည့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့် ATM စက်အစရှိသည့် လူနာထိတွေ့အသုံးပြုသွားနိုင်သည့် နေရာ၊ ပစ္စည်းများအားလုံးအား ပိုးသတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် CDC မှ တိုက်တွန်းထားသည်။
In the United States, NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirators or better must be used in the context ofacomprehensive, written respiratory protection program that includes fit-testing, training, and medical exams.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း၊ သင်တန်း နှင့် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သော ပြည့်စုံပြီး ရေးသားထားသော အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်၏ အခြေအနေတွင် NIOSH-အတည်ပြု N95 ဖီလ်တာ မျက်နှာဖုံး အသက်ရှူနှာခေါင်းစည်းများ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည့်အရာများကို အသုံးပြုရမည်။
The methods will follow the approach used in the current influenza surveillance system and recent serology study, and includes five components: (1) primary care clinical surveillance; (2) virological surveillance; (3) population serological surveillance; (4) convalescent sera in cases; and (5) data curation.
နည်းစနစ်များသည် လက်ရှိ တုပ်ကွေးရောဂါစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစနစ်နှင့် လတ်တလော သွေးရည်ကြည် စစ်ဆေးလေ့လာမှုတွင် အသုံးပြုနေသော နည်းလမ်းအတိုင်းဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်း ငါးခု ပါဝင်ပါသည်။ (1) ပင်မ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု ၊ (2) ရောဂါပိုးမွှား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၊ (3) အများပြည်သူတို့၏ သွေးရည်ကြည်စမ်းသပ်မှုအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၊ (4) ပြန်လည်သက်သာလာသော ကူးစက်လူနာများ၏ သွေးရည်ကြည်များနှင့် (5) အချက်အလက်များ စုဆောင်းရယူခြင်း။
kumuha ulit ako (タガログ語>英語)i was not home (英語>タガログ語)masakit puson ko (タガログ語>英語)glam (英語>タガログ語)she is very intelligent girl (英語>ヒンズー語)markedly different (英語>ギリシア語)steuerrechtskreisen (ドイツ語>イタリア語)meaning of zapping (英語>タガログ語)what is the meaning of sakalam (タガログ語>英語)retinop (英語>スペイン語)pseudogiuridici (イタリア語>ドイツ語)ball joint (英語>アフリカーンス語)walang hinihinging kapalit (タガログ語>英語)bogoshipda meaning in english (韓国語>タガログ語)profeternes (デンマーク語>スワヒリ語)exiger (フランス語>英語)i am proud to be an indian essay in hindi (英語>ヒンズー語)we prsy this prayer (英語>ベンガル語)tawas city (英語>ヒンズー語)abito ginggon (タガログ語>英語)hindi na ako aasa pang tumawag ka (タガログ語>英語)kia ora anoe(マオリ語>英語)amar (スペイン語>ロシア語)domus est ubi cor est (ラテン語>英語)kacang ketupat (マレー語>タミル語)